”Montella wuxuu sheegay inuu wada iibsanayo Mario Pasalic” – Wakiil – Gool FM
”Montella wuxuu sheegay inuu wada iibsanayo Mario Pasalic” – Wakiil
(Milano) 31 Okt 2016 – Wakiilka Mario Pasalic ayaa rumaysan in macmiilkiisu uu muujiyay inay Milan ku tashan karto kaddib markii uu laacibkan khadka dhexe uu shalay saftay kulankiisii ugu horreeyay ciyaartii ay shalay 1-0 uga badiyeen Pescara.
Pasalic, ayaa xagaagii qaab amaah ah uga yimi Chelsea wuxuuna shalay 30 daqiiqo saftay ciyaartii, balse wakiilkiisa Vincenzo Cavaliere ayaa ku kalsoon in Croat-kani uu laacib rigli ah ka noqon doono San Siro.
“Aad buu u faraxsanaa waayo waa wax xiise leh xirashada funaanadda AC Milan, si wanaagsan buuna u tabaranayaa. Sharaf bay u tahay inuu Montella sheego inuu iibsanayo kahor ciyaartii,” ayuu wakiilku ku yiri MilanNews.
“Jir ahaan wuu faya qabaa wuuna dheeli karaa 90 daqiiqo, balse Milan si wanaagsan bay u ciyaaraysaa isaga ayaana laga doonayaa inuu booskiisa u diriro, waxaase shalay cadaatay inuu macallinku ku tashan karo.” ayuu yiri Cavaliere oo sheegay in ay Milan laacibka wada iibsan karto bisha Jannaayo maaddaama uu ku qaabsan yahay mashruuca Milan ee da’yarta ku dhisan.
Xiriirka kubadda cagta Spain oo baahiyay waqtiga la ciyaari doono El-Clasico